धान काट्दै किसानहरु
पोखरा, २९ कात्तिक । तिहार सुरु भइसक्दासमेत पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ बिरुवा फाँटका किसानहरुलाई धान काट्न भ्याई–नभ्याई छ । यस वर्ष अधिकमासका कारण दशैं तिहार पछाडि धकेलिएको र धान काट्ने समयमा तिहार परेकाले पर्वको प्रवाह नगरी किसानहरु धान काट्न व्यस्त देखिएका हुन् ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ बिरुवा फाँटका किसानहरु यतिबेला धान काट्न व्यस्त छन् । यसवर्ष धान काट्ने समयमा तिहार परेको छ । तर पनि किसानहरु चाडपर्वको प्रवाह नगरी वर्षभर खाने अन्न थन्क्याउन लागि परेका छन् । छिटोछिटो धान काटेर तिहार मनाउने योजनामा किसानहरु छन् । किसानहरुले यस वर्ष धानमा हाल्ने मल नपाउँदा उत्पादन कम भएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले समयमै धान उपलब्ध नगराइदिँदा आफूहरु मारमा परेको किसानहरुले बताए ।
अघिल्लो वर्षहरुमा तिहार सकिएपछि मात्रै धान काट्ने समय आउँथ्यो । तर यसवर्ष चाडपर्व र धान काट्ने समय एकैपटक परेपछि अधिकांश किसानहरु खेतमा देखिएका छन् । त्यसैले किसानहरु धान काटेर तिहार मनाउने र तिहारपछि धान उठाउने काममा लाग्ने योजनामा छन् ।